Fomba dimy hanatsarana ny lalao marketing amin'ny atiny | Martech Zone
Talata, Aprily 2, 2019 Talata, Aprily 2, 2019 Martha Jameson
Raha mirotsaka amin'ny marketing amin'ny atiny misy karazany ianao, dia mampiasa paikady. Mety tsy tetikady ofisialy, nomanina na mahomby io, fa paikady kosa.
Eritrereto ny fotoana, ny enti-miasa ary ny ezaka rehetra mamorona votoaty tsara. Tsy mora izany, noho izany ilaina ny mitarika an'io atiny sarobidy io amin'ny alàlan'ny paikady mety. Ireto misy fomba dimy hanatsarana ny lalao marketing atiny.
Mahaiza mandanjalanja amin'ny loharano
Ny marketing amin'ny atiny dia mety ho lafo, na izany dia midika hoe manambola vola be amin'ny fotoanao hamoronana atiny ianao, na mandany vola amin'ny famindrana vola amin'ny famoronana. Zavatra lafo toa ny marketing amin'ny atiny dia mila tarihina am-pahendrena ary ny mijery analytics dia ampahany lehibe amin'izany.
Azonao an-tsaina ve ny fametrahana ireo loharano rehetra ireo mba hahalalanao fa nanosika ny atiny tao amin'ny Facebook ianao raha ny ankamaroan'ny fifamoivoizanao dia avy amin'ny Instagram sy Pinterest? Maharary izany; ary tsy ianao no olona voalohany niaina an'izany. Makà fotoana kely hijerena ireo analytics momba ny haino aman-jery sosialy hahafahanao mitarika ny atiny amin'ny sehatra sy mpihaino mety.
Mivoria amin'ny ekipanao matetika
Mety manana ekipa natokana ho an'ny marketing amin'ny atiny ianao, na tsia. Na izany na tsy izany, zava-dehibe ny fihaonana farafahakeliny indray mandeha isan-kerinandro ary hifandraisana amin'ireo olona tompon'andraikitra amin'ny famoronana sy fampiroboroboana ny atiny. Raha afaka ianao dia mihaona isan'andro.
Miresaha momba ny zava-baovao izay natao hatramin'ny nahitanareo farany. Mizaha ny ho avy ary manankaha asa ho an'ny olona marina. Ifanakalozy hevitra ny zavatra ataon'ny mpifaninana aminao sy ny fomba hanatsarana ny atiny.
Bonnie Hunter, bilaogera marketing ao Aostralia2Soratra ary WritingMyX
Ireo fivoriana ireo koa dia fotoana mety hampiarahana ny lohanao sy hanaovana ati-doha. Inona avy ireo lohahevitra malaza amin'ny fironana mety hananganana atiny?
Amboary ny mpihaino anao
Mifantoha amin'ny fampitomboana ny mpihaino anao. Ny lalàna vaovao dia mibaiko fa ny angona dia tsy maintsy angonina amin'ny alàlan'ny fanekena, izay midika fa omena an-tsitrapo ny angona fa tsy mioty. Ny marketing amin'ny atiny dia zava-dehibe kokoa amin'ny fisian'ity lalàna ity satria ny atiny tsara dia fomba iray lehibe hampirisihana ny olona hanolotra am-pifaliana ny mombamomba azy.
Rehefa tian'ny olona ny atiny dia hatolony ny angon-drakitra satria te handray hatrany ny entanao ianao. Eritrereto ny maodely mahomby kokoa noho ny fanesorana ny Internet ho an'ny angon-drakitra olona tsy dia miraharaha firy. Manome anao fotoana hananganana fifandraisana amin'ny olona izany ary ahafahan'izy ireo mahatsapa ho mifandray amin'ny atiny.
Billy Baker, mpivarotra atiny at BritStudent ary ManarakaCoursework.
Raiso ny mari-pana amin'ny fahombiazan'ny ezaka ataonao amin'ny fijerena ireo mpihaino anao, ny fanamarinana ny isao tamin'ny taona lasa, ary ny fahitana raha toa ka mifanaraka amin'ny ezaky ny marketing amin'ny atiny ny isan'ny mpanjifanao.
Mametraha tanjona mety
Raha tsy fantatrao izay tanjon'ny marketing amin'ny atiny, ahoana no hahatratraranao azy? Ny ampahany lehibe amin'ny fametrahana ireo tanjona ireo dia hiorina amin'ny analytics, ohatra:
Sehatra inona no anaovanao tanjona?
Aiza no tianao hisy ao anatin'ny herintaona?
Te hampitombo ny mpanaraka anao ve ianao, avy eo firy?
Na mety hampitombo ny fifandraisan'ny mpampiasa sy ny fivezivezena fotsiny ianao. Raha vantany vao manana ny tanjonao lehibe isan-taona ianao dia tonga ny fotoana hanapahana izany ho tanjona kely kokoa sy mora azo isam-bolana. Ireo no ho vato fiosinao hahatratra ilay tanjona lehibe sy lehibe. Ny dingana farany dia ny mamantatra izay asa isan'andro tokony hataonao mba hahatonga ireo tanjona lehibe kokoa ireo ho tonga zava-misy.
Farito ny fomba handrefesanao ny fahombiazanao
Mila manaraka ny zava-bitan'ny atiny ianao raha te hahalala ny fahombiazany. Handeha handinika metrika sarotra toa ny varotra sy ny fitarika na ny malefaka toa ny fidiran'ny mpampiasa media sosialy ve ianao? Ny metrika sasany izay tena tianao harahina dia ny fandrefesana ny fanjifana (firy ny olona mahita na misintona ny entanao), ny fizarana metatra, ny metatra mitarika ary ny refin'ny varotra.
Ny marketing amin'ny atiny dia hetsika mavitrika izay mitaky finiavana hanova paikady rehefa misy zavatra tsy mandeha. Zava-dehibe ny fananana tanjona ary ny fahalalana hoe inona ny refy anaovanao ny fahombiazana. Tsy mora ihany koa izany, koa mahereza amin'ny fomba itarihanao ny enti-manana. Araho ireto torohevitra dimy ireto hanamafisana ny lalao marketing atiny.
Tags: afa-poContent Marketingekipa marketing amin'ny atinyfandrefesana atinyloharanom-pahalalanafahombiazan'ny atinyekipa atiny
Martha Jameson dia tonian-dahatsoratra sy mpamaky PhDKingdom ary AcademicBrits. Talohan'ny nahitany ny fitiavany hanoratra dia niasa tamin'ny famolavolana sy mpitantana tranonkala i Martha. Ny laharam-pahamehany dia ny fampiasana ny zavatra niainany, ny antony manosika ary ny fahalalàny hanampiana ireo mpamaky amin'ny bilaogy toa OriginWritings.